Caasimada Oslo oo go'an adag kasoo saartay Xayiraadaha laga Fududeenayo Wadanka oo dhan Somali - Wararka Somalida, Caalamka
HomeWararka Maanta SomaliskaCaasimada Oslo oo go’an adag kasoo saartay Xayiraadaha laga Fududeenayo Wadanka oo dhan
Caasimada Oslo oo go’an adag kasoo saartay Xayiraadaha laga Fududeenayo Wadanka oo dhan
April 15, 2021 Wararka Maanta Somaliska, Wararka Norway 0
Magaalada Oslo waxay laba toddobaad oo kale ku sii hayn doontaa tallaabooyinka coronavirus-ka laakiin xoogaa xoogaa ayay u fududeyneysaa Xaayiraadaha gaar ahaan carruurta iyo dhallinyarada.
“Talada aan ka helnay Agaasinka Caafimaadka ee Norwey iyo Machadka Qaranka ee Caafimaadka Dadweynaha sidoo kale waa mid aad u cad: Xaq ma ahan in Oslo la furo hada,” ayuu yiri Madaxa Golaha Magaalada Oslo Raymond Johansen (AP).
Xaaladda infekshinka oo aad u xun awgood, Golaha Degaanka ayaa go’aansaday in tallaabooyinka aan ku hayno Oslo lagu sii hayo laba toddobaad, illaa Khamiista, Abriil 29, ayuu yidhi.
Si kastaba ha noqotee, xoogaa xoogaa nasiino ah ayaa loo heli doonaa carruurta iyo dhallinyarada. Laga bilaabo Isniinta, dhammaan ardayda dhigata dugsiga Oslo waxay mar kale awoodi doonaan inay ku noqdaan dugsiga.
Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan markale ku soo ceshano ardaydeena oo dhan iskuulka. Halkaas, waxay wajihi doonaan heer “casaan ah” oo la xoojiyay, oo xitaa ka xakameyn kara infekshinka sidii hore, “ayuu yiri Johansen.